Somalia Nation :: Somali Language | Business / Anacsiga
Daawo Video: Pro: Liban Egal iyo wafdigii ballaarnaa ee booqday deegaannada Puntland, Somalia
Degaano dhawr ah oo ku yaalla Maamulka Puntland ayaa waayadan waxa socdaalo ku kala bixinaya Aqoonyahano Soomaaliyeed oo ay wehliyaan Ganacsato Shisheeye si ay ugu koor galaan fursadaha banaan ee xaga Maalgashiga iyo hormarka Degaanada Maamulkaas.
Xubnahan gaaray Degaanada Maamulkaas waxa si wayn halkaas ugu soo dhaweyay Madaxda Maamulkaas kuwaas oo bogaadiyay talaabada Aqoonyahnada Soomaliyeed ay ku doonayaan Maalgashiga Puntland
Kulan Madaxda Puntland ay la qaateen Ganacsatadan iyo Aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa lagu bogaadiyay sida Aqoonyahanadan Soomaaliyeed isku dhabar jibinayaan ka faa’ideysiga fursadaha banaan iyo maalgashiga Kheyraadka Dabiiciga ee Ilaah ku manaystay Puntland.
Intii halkaas ay ku sugnayeen waxa ay shirar kala duwan oo jeedkoodu ahaa maalgashiga Degaanada iyo ka faa’ideysiga Khayraadka la qaateen qaybaha Bulshada iyo Maamulada halkaas ka jira.
“Ujeedka safarkan waa sidii daraasaad ugu samayn lahayn dhamaan degaanada Puntland isla markaana maalgashi loogu samayn lahaa Khayaardka Badda iyo Bariga iyo ka qayb qaadashada hormarka baaxada leh ee ka socda Puntland “ sidaa waxa warfidiyeenka u sheegay Proff Liibaan Cabdulaahi Cigaal oo horkacayay wafdigan.
Maamulka Degaanada Xeebaha oo ay wehliyaan Haldoorka Degaanka iyo wafdiga uu horkacayay Aqoonyahan Prof Liibaan Cabdulaahi Cigaal ayaa dhaxmaray kulamo diirada lagu saaray baahiyaha dhanka Ganacsiga, Adeega Bulshada iyo Xasiloonida.
HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA WARBIXINTA
DHAGEYSO:-Kaalmaha Shidaal iyo Magaalada Muqdisho iyo sida ay u shaqeyan(Warbixin)
Ganacsiga Shidaalka ee hareeraha wadooyinka ayaa sara kacay, taas oo keentay is bedel dhinaca qiimaha shidaalka.
Haween ayaa ku jira dadka ka ganacsada kaalmaha shidaalka ee Magaalada, kuwaas oo sheegay in ganacsiga shidaalka uu soo maray heerar kala duwan.
Qiimaha Shidaalka ee Kaalmaha iyo kuwa cagaga ee ayaa kala duwan, sida ay sheegeen ganacsada shidaalka ku iibisa Magaaladan
Warbixinta Hoos Ka Dhagayso
warbixin Maxamuud Cismaan Warsame ganacsiga shidaalka